Fantaro i Davy Nlovu, hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron’i 17-23 jolay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2019 5:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Català, Esperanto , English
Sary nomen'i Davy Nlovu.
Ao anatin'izao taona 2019 izao ka anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny antserasera, hifandimby ireo Afrikana mpikatroky ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny Afrikana. Ny lahatsoratra etoana dia firesahana amin'i Davy Nlovu (@NdlovuDavid) hahafantarantsika izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro itantanany ny kaonty.
Davy Nlovu no anarako ary avy ao Zimbabwe aho. Tjwao avy amin'ny vahoaka Tjwa na San avy ao atsimon'i Afrika no misy ny vondron'ny fiteniko. Mpikatroka arapiteny aho ary manana fahavitana eo amin'ny fiteny Khoisan, ny fikarohana ara-kolontsaina ary ny famelomana aina indray. Mpanoratra ihany koa aho ary efa za-draharaha eo amin'ny fandraketana sy fanakambanan-tantara. Miasa amin'ny fananganana fandriampahalemana, fitantanana ny servisin'ny mpanjifa ary ny fitantanana ny loharanon-kevitra aho. Mpilalao mahay aho ary mahavita manao fandaminana tsara.
Fiteny ahiana hanjavona tanteraka ny Tjwao ary tsy ampy folo ny mpiteny azy izay anelanelan'ny taona 65 ka hatramin'ny taona 97. Tsy misy aloha ny tanora mpiteny azy amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha-53 taona ahy dia mihevitra aho fa izaho no tanora indrindra amin'ny mpiteny azy. Vao manomboka mampiasa ny media sosialy mihitsy izahay izao mba hampiroborobo ny fahitana ny fiteny Tjwao, raha tsy izany dia tsy misy ny fitaovana, ary tsy misy akory aza no afa-mampiasa ny Google ijerena Tjwao amin'ny neto.
Ny ifantohako dia ny fomba ampiasana ny media sosialy mba hanamafy kokoa ny fahaveloman'ny Tjwao sy hisarihana ny tanora ho liana aminy amin'ny fianarana ny fiteny.
Tany am-piandohan'ity taona ity izahay nanomboka nanao lesona fiteny [amin'ny sarimiaina] izay vonona hojerena amin'ny laptop ary nampitombo ny isan'ny tanora mpianatra izany. Lasa nihamora kokoa ihany koa ny nanao lesona amin'ny endrika nomerika. Afa-mandefa lesona any amin'ireo departemantan'ny governemanta any izahay ho porofo fa misy ny fiteninay ary ilainay izany mba ho tafiditra ao anatin'ny seha-pirenena.